pagemaker - MYSTERY ZILLION
January 2008 edited September 2010 in DTP
Adobe PageMaker 7.0 ရဲ့ အနာဂတ်မှာ ရှိနိုင်ပါသလား။ အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ တင်ပြဆွေးနွေးရ အောင်လား...
မြန်မာပြည်ရဲ့ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းဘယ်နှယ်ခုမှာ လက်ရှိသုံးစွဲနေလား၊
ဘာကြောင့် စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ပေါ့ပါးလျှင်မြန်စွာ ဖန်တီးနိုင်ရတလဲ။
စားပွဲပေါ်မှာ စာမျက်နှာ တစ်ခုကို မြင်ရသကဲ့သို့ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တာကို စာဖတ်သူ နှစ်သက်ပါသလား
စသည်ဖြင့် စသည့်ဖြင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်.... အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်....
ကျွန်တော်ကတော့ စာစီစာရိုက် သမားမဟုတ်တော့ word ကို ပိုကြိုက်တယ်..
ဒါပေမယ့် တကယ်တန်း စာစီစာရိုက်အတွက်ကတော့ Page Maker တော့ မသိဘူး..
Indesign ကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ...
Page Maker 7.0 ကို အခုထက်ထိ သုံးနေတုန်းပဲ ထင်တယ်..
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆို Indesign မှာ Bold , Italic စတာတွေက
ဒါကြောင့်7ကိုပဲ ဆက်သုံးနေရတယ်လို့ ထင်တာပဲ.. :P
Pagemaker ကို မူရင်း Adobe က တောက်ပံမှု မပေးတော့ဘူးလို့ ကြေညာထားပြီးသားပါ။ နောက်ပိုင် version တွေ လုံးဝ ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ ပါဘူး။ world 2007 ကို ပြောင်းသုံးသင့် ပါတယ်။ သူက အလွန်သုံးရလွယ်ကာလို့ပါ။
Indesign က တော့ ပိုကောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အခိုထိတော့ လုံးဝကို အသုံးဘူးသေးပါဘူး။
စာစီစာရိုက်ဆိုင်တွေမှာ သုံးနေကြတာပါပဲ... :d
Pagemaker က ရပ်သွားပြီဘဲ။
အဲဒီအတွက် Adobe InDesign ကိုဘဲ အစားထိုးထုတ်သွားမှာလေ။
ကျနော်ကတော့ ပြောင်းသုံးနေပြီ။ တွေ့ရတဲ့ပြဿနာကတော့ italic အတွက်ဘဲ။ bold အတွက်ကတော့ Fontographer ထဲထည့်ပြီး ပြင်လိုက်တာ အိုကေတယ်။ italic ကို အဲလိုပြင်တော့ အဆင်မပြေဘူးဗျ။ ဒီတခုဘဲ ပြဿနာတွေ့တယ်။
အခြားအပိုင်းဆိုရင်တော့ အင်ဒီဇိုင်းက ပေ့ချ်မေ့ကာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာ။ MS Word ထက်လည်း ပိုအဆင်ပြေသေးတယ်။ ပြီးတော့ကာ ... Corel Draw, Illustrator တို့ မလိုသလောက်ဘဲ။ Photoshop တော့ လိုမှာပေါ့လေ။ ဒါတောင်မှ ရုပ်ပုံရဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဘက်ဂရောင်းတွေကို ဖိုတိုရှော့ပို့စရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်ပြင်နိုင်သေးတယ်။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ အချစ်ရယ်။ တကယ့်ကိုပိုကောင်းပါတယ်။
ပြောင်းလိုသူများ မေးချင်တာရှိရင် (သိသလောက်) ဖြေပေးပါ့မယ်။ ကျနော့်ဆီကို မေးလ်ပို့လည်း ရပါတယ်။
Indesign ကို သုံးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်...
ဒါပေမယ့် အခုက ရုံးသုံးပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က PM70 က အသုံးအများဆုံးဖြစ်နေတုန်းပဲ ..
ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာစာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံတွေကလည်း တချို့ဟာတွေမှာ PM70 က အဆင်ပြေတယ်...
ခက်တာက ယူနီကုတ် မရဘူး...
Indesign ကိုသုံးဖို့ဆိုတာကလည်း တရုံးနဲ့တရုံး ဖိုင်တွေကို မူရင်းအတိုင်းပေးတဲ့အခါကျတော့ သူ့မှာ ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုလာတဲ့အခါ Indesign မရှိတာတို့ မသုံးတတ်တာတို့နဲ့ ဒုက္ခရောက်တတ်တယ် PM70 ကို အခုတောင် ယူနီကုတ်မရလို့သာ Word နဲ့ အစားထိုးနေရတာ... တကယ်တမ်းကျတော့ စာစီစာရိုက်ဖို့ပဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ကိုက်တာက PM70 ပဲ... ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးဆိုတော့လည်း ကျွန်တော်ကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် PM70 မှာ ယူနီကုတ် လက်ခံနိုင်မယ့် အပိုဆောင်းလေးတခုခု မြန်မာပြည်က ရေးပေးနိုင်ရင်ကောင်းမှာလို့ တွေးမိတယ်... :39:
ရုံးလုပ်ငန်းသမားတွေကတော့ 75% PM70 သုံးကြတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာစသင်ကတည်းက အဲဒါနဲ့သင်ကြရတာများတယ်လေ..
အခုလည်း သင်နေတုန်းပဲ တော်ရုံနဲ့တိမ်ကောမှာမဟုတ်ဘူး.
ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်လို.. နောက် တော်တော်များများ ကပ်သီးကပ်သပ်လုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေမှာ PM70 က ရှင်းနိုင်တယ်ဗျ
စီခရေစီ စကားများအားထောက်ခံစကားပြောလိုပါသည်။ ရုံး၀န်ထမ်းတွေအတွက်ကတော့ PM7.0 သည် အလွန်ကောင်းမွန်သလောက် ယူနီကုတ်ကလဲ အလွန်တာစားနေတာကြောင့် ..တောင်းဆိုပါသည် ...ပညာရှင်များသနားပါ..pm7မှာ ယူနီကုတ်လေး ရအောင်အားပေးကြပါအုံး
computer__crazy နဲ့ simplejunior တို့ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်...
မြို့တွေမှာ pm7.0, pm6.5, pm6.52plus. pm7.0.1 စသဖြင့် သုံးကြပါတယ်..
pm က စက်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို လိုက်ပြီ အလုပ်လုပ်ပါတယ်..
စာမျက်နှာနဲ့ပြောရရင် 256MB မှာဆိုရင် 100 စာမျက်နှာလောက် ကောင်းကောင်းအလုပ် လုပ်ပါတယ်..
512MB လောက်ဆိုင်ရင် link ချိတ်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီကောင်းလာပါတယ်..
1GBလောက်ဆိုရင်ဓါတ်ပုံတွေ၊ html တွေမှာ ပိုပြီကောင်းလာပါတယ်...
CS3 နဲ့လဲ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်...
သို့လဲပဲ ယူနီကုတ်သမားတွေ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် တချိန်မှာ အစ်ကိုတို့ပြောသလို
ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်... Admin ကြီးတို့လဲ ကြိုးစားမယ်လို့သိရတယ်..
ဒါပေမဲ့ စက်အလုံးအရေအတွက် များများ၊ အခြား စာစီစာရိုက် pro တွေနဲ့ တွဲဘက်
ဥပမာ MS office 2007 SP1, Vista, office 2003 SP3
လက်ရှိခေတ်ကြီးထဲမှာ အမြန်ဆုုံးနည်းနဲ့ စာရိုက်လွယ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်..
နောက် ၃ နှစ်လောက်ထိ ရှိလာမယ်ထင်တယ်..
မန်းကဆိုင်တွေကတော့ pm ကိုသုံးနေကြဆဲပါ...
ဒီလိုစာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းတွေဟာ အများသူတွေနဲ့ နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရတယ်..
ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် IT Pro သမားတွေလဲ ရှောက်လို့မရပါဘူး၊
ကွန်ပျူတာ သင်ဆဲကျောင်းသားတွေလဲ ဒါကို လုပ်နေရတယ်..
ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးကြပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ချစ်စွာသော icefirester
ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ မြန်ခြင်လို့လုပ်တာ
ပိုပြီး တိကျတယ်.. အဘက်ဘက်ကပြောရင် အားလုံးကောင်းတယ်..
ှုAdobe Indesign CS3ကို Install လုပ်ပြီးနောက်မှာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုက ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ကို Photoshop CS2က လက်ခံသွားတာပါပဲ ... အခု ဖိုတိုရှော့ပ်မှာ ယူနီကုတ်စာလုံးကို သုံးလို့ရသွားပါပြီ... ဒါပေမယ့် PM70 ကတော့ နဂိုအတိုင်းပါပဲကွယ်.... ( ဖြစ်နိုင်ရင် ပီအမ် ဆဲဗင်းဇီးရိုးကို ယူနီကုတ်သိအောင်လုပ်ပေးကြပါလားဟရို့.... :77:
Adobe က လုံးဝကို support မပေးတော့လို့ပါ... နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ indesign ပြောင်းသုံးခိုင်းနေတာပဲ...
Page Maker ကို support မလုပ်တာလည်း တော်တော်ကြာပြီ...
အဲမှာ unicode ပြသနာ ဆွေးနွေးထားတာတွေ့ရမှာပါ
တကယ်တော့ လူတွေက pagemaker ကို ပဲ စွဲပြီးပြောနေကြလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့လို word သမားတွေကြတော့ pagemaker လုပ်နိုင်တာကို အမြန်နှုန်းအလိုက်ပြိုင်ချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ pm က မပွင့်ခင်မှာပဲ။ word က တစ်မျက်နှာ နှစ်မျက်နှာလောက်ကိုအသာလေး ပြီးနေပါပြီး။ auto setting တွေမှာလည်း word က အသင့်ပြင်ထားလို့ရတယ်။ ဥပမာ။ tool ထဲက customize လိုမျိုးပေါ့။ english စာရိုက်ရာမှာ ပိုတောင်အဆင်ပြေသေးတယ်။ မြန်မာနဲ့ eng နဲ့ရောနေတာတွေကိုပါ အဆင်ပြေပြေရိုက်နိုင်တယ်။ ဟဲဟဲ word အကြောင်းပြောရရင် အများကြီးကျန်နေသေးတယ်။ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းအလိုက်ပြန်ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ။
Pagemaker နဲ့လုပ်ထားတဲ့အသင့်သုံး ပုံစံတွေပါ။CALENDER ,certificate,CV အပြင်စာချုပ်တွေနဲ့ ကဒ်တွေတွက်ပါ ပါတယ်။အားလုံး Tamplete file ၃၀ ပါ ပါတယ်။၄ ပိုင်း ခွဲတင်ထားပါတယ်။
I found that in PM , myanmar true type fonts can't bold / Italic because of true type fonts. in Word it is OK. Postscript fonts are all OK. If you change Win postscript fonts to true type fonts then in PM fonts bold / italic problem occurs.
Word is more efficient on typing but PM is better in publishing and now Indesign replaced PM. PM is dead now.
Adobe Type Manager ကို Install လုပ်ပြီး သုံးကြည့်ပါ..
Adobe Type Manager Lite ကို ဒီမှာ အလွယ်တကူ ရနိုင်ပါတယ်.. အဆင်ပြေသွားပါစေ..
ရုံးတွေမှာ PM 7.0 သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ...
ရုံးတွေ အတွက် အသုံးလဲ ၀င်တယ်လေ..
ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့ ပုံစံ၊ လိုချင်တဲ့ size ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်...
မိမိလိုချင်တဲ့ column guide ကို စိတ်ကြိုက် အပိုင်းပိုင်းခွဲလို့ရတယ်...
word မှာဆိုရင် သိပ် အဆင်မပြေဘူး...
ပြီးတော့ တစ်ခြား powerpoint excel..... စတာတွေနဲ့လဲ ချိတ်သုံးလို့ ရတယ်...
word ကိုတော့ စသုံးကာစမို့လားတော့ မသိ ၊ သိပ်တော့ အဆင်မပြေသေးဘူး...
word ကို အပြင်မှာ တော်တော်လေး အသုံးနည်းပါတယ်...
အခု word ကိုတော့ စသုံးကြည့်နေတာ အဆင်တော့ပြေပါတယ်...
PM 7.0 နဲ့ word က ဆင်မလိုလို နဲ့ ကွဲနေတာတွေ ရှိနေလို့ပါ...
ဟဲ..ဟဲ အဲဒီလိုမျိုးကြီး ပြောလို့မရဘူးဗျ..
PM 7.0 မှာလဲ word လိုပဲ စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ ရတာတွေရှိတယ်...
ဥပမာ..ပုံ(အဆောက်အဦ အကွက်ချပုံစံ ....) ကို အသေးစိတ်ဆွဲတဲ့အခါ PM 7.0 က ပိုသုံးလို့ ကောင်းတယ်..ပြီးတော့ word, powerpoint စတာတွေနဲ့ ချိတ်သုံးလို့ရလို့ အဆင်ပြေတယ်..
ပြီးတော့ စာကြောင်းတွေ စာလုံးတွေ ဘေး ဘယ် ညာ ကျုံ့ ၊ချဲ့ လုပ်ရတာ ပို အဆင်ပြေတယ်... လိုချင်တဲ့ပုံစံ size ကို စိတ်ကြိုက် အတိအကျ လုပ်ရတာ မြန်တယ်..
eng နဲ့ မြန်မာ တွဲရိုက်ရာမှာ zawgyi သုံးနဲ့တူတယ်...printer ကို အပြင်မှာ သွားထုတ်ချင်ရင် ဆိုင်မှာ ဇော်ဂျီ တင်မထားရင် ဒုက္ခ ရောက်တယ်...internet မရသေးတဲ့ ဒေသတွေမှာ သိပ်အဆင်မပြေသေးဘူး..
PM 7.0 မှာလဲ မြန်မာ နဲ့ အင်္ဂလိပ် တွဲရိုက်လို့ရအောင် အစကတည်းက လုပ်ထားရင်ရပါတယ်..
ဥပမာ.... မြန်မာ font တစ်လုံးနဲ့ အင်္ဂလိပ် font တစ်လုံးကို တွဲရိုက်လိုက်... " ကu " ပြီးရင် control+c (copy) နှိပ်ထားလိုက်...
မြန်မာ အင်္ဂလိပ် တွဲရိုက်ရမယ်ဆိုရင် word က ဇော်ဂျီ(font)မှာ Ctrl+Shift နှိပ်သလို PM 7.0 မှာလဲ Ctrl+V ကို နှိပ်ပြီး ရိုက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်...
သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ သုံးရတာ အဆင်ပြေကြပါတယ်...
ကျွန်တော် word ကော PM 7.0 ကော နှစ်ခုစလုံးကို အဆင်ပြေသလို သုံးပါတယ်..
:39: ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပဲဗျ
kaytaya wrote: »
ကျွန်တော်လည်း PM 70 ကနေ Word မဖြစ်မနေသုံးလာရသူပါ.. ဒါပေမယ့် .. Drawing နဲ့ ပတ်သက်လာရင် PM က Word ကို မမှီဘူး.. မျဉ်းကွေးတွေ မျှားတွေ အစရှိသဖြင့် Automate တွေ က Office မှာပဲပါတာ.. PM မှာ မရဘူး.. ပြီးတော့ Gradient Color မရဘူး ပြီးတော့ Color Transparency မရဘူး .. Pattern သိပ်မစုံဘူး.. Texture ဆို လုံး၀ မရှိဘူး.. 3D မရဘူး.. Shadow မရဘူး.. (လက်နဲ့လုပ်မှ ရမယ်..) Wordart မရဘူး ဇယား Table 3.0 နဲ့ တိုက်ရိုက် လုပ်လို့မကောင်းဘူး လက်နဲ့ဆွဲမှကောင်းတယ်.. အချိန်ကြာတယ်.. အဲဒါတွေ Word မှာကောင်းတယ်.. :71: အကြိုက်ဆုံးက Excel ကို Word ပေါ်မှာ ဒါရိုက်ခေါ်သုံးလို့ရတာပဲ.. ချက်ချင်းလုပ်ချက်ချင်းမြင်ပဲ.. ဘယ်ဟာနဲ့ ချိတ်ချိတ် Word ကိုလည်း ချိတ်လို့ရပါတယ်.. မြန်မာအင်္ဂလိပ် ပြောင်းရိုက်တာက Office မှာလည်း ဒီလိုလုပ်လို့ ရတာပါပဲ .. စာလုံးအစိပ်အကျဲအတွက်လည်း Word မှာ Character Spacing ဆိုတာ ပါပြီးသားပါ.. အိုကေပါတယ်.. PM 70 မှာအတိုင်း ရွေးချယ်စရာတွေ အသင့်ပဲ.. Shortcut အကျွမ်းတ၀င်ရှိဖို့ပဲ လိုတယ်.. ဒီထက်ကောင်းတာတစ်ခုက Shortcut ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လုပ်လို့ရသေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ယူနီကုတ်ကို သုံးကိုသုံးရမယ် ဆိုတဲ့အချိန်မှာ .. PM က ဖင်ထိုင်လဲသွားတယ်.. Word နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် PM ကို ကြိုက်စရာဆိုလို့ Text Frame လေးတွေကို ချိတ်လျက်သားလေး လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့ရတာတစ်ခုပဲ ကြိုက်တယ်.. ဒါပါပဲ..
Customer တွေအရှေ့မှာ လုပ်ပေးရတဲ့ အလုပ်တွေဆိုရင် Pm နဲ့လုပ်ရင် Customer တွေအနေနဲ့ ပိုပြီး မြင်သာပါတယ်၊ Paste board ထဲ ရွှေ့ထားတာတွေလည်း သူတို့မြင်နိုင်တယ်၊ သူတို့စိတ်ထဲမှာ စာအုပ်တစ်အုပ်လို စာရွက်တစ်ရွက်လို အမှန်တကယ်ခံစားနိုင်ပါတယ်၊ မျဉ်းကွေးတွေ၊ လိုင်းတွေအတွက်ကတော့ PM နဲ့ လုပ်မရရင် Corel နဲ့ ဆွဲပြီး ထည့်လိုက်ရင်ရတယ် ပြန်ပြင်ချင်သမျှကို Corel နဲ့ပဲ စိတ်တိုင်းကျ ပြန်ပြင်နိုင်တယ် ျWord ထဲမှာက Corel လောက် ပုံဆွဲလို့မကောင်းတာအမှန်ပါ အစွဲအလန်းကြီးကြီးနဲ့ မရမကဆွဲရင်တော့် ရပါလိမ့်မယ်၊ အချိန်သိပ်ကုန်တယ် မီးစက်ဆီဖိုးနဲ့ ရတာနဲ့ မကိုက်ပါဘူး Print ထုတ်ရင်လည်း PM ထဲထည့်လိုက်တဲ့ Corel က word ထဲထည့်တဲ့ Corel ထက်ပိုကောင်းပါတယ် ပြန်ပြင်ချင်ရင်လည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ DTP လုပ်ငန်းသုံးအနေနဲ့ကတော့ PM က အဓိကပါ၊ စာစီစာရိုက်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့ လုပ်စားနေရင် PM ကို လုံး၀လက်လွှတ်လို့မရသေးပါ၊ Indesign ပိုကောင်းတာမှန်ပေမယ့် PM က အများသုံးပါ။ PM ရဲ့ အဓိကအားသာချက်က Object အများစုကို Insert လုပ်နိုင်ခြင်းပါ၊ လုပ်ရကိုင်ရတာ လွယ်ဖို့ရယ် မြန်ဖို့ရယ် သပ်ယပ်ဖို့ရယ် Print ထုတ်ရင် ငြင်းရက်စရာမရှိအောင် ဖြစ်ဖို့ရယ်ဆိုရင် PM က သေချာပါတယ်၊ နှစ်ခါပြန်ထုတ်ရတာရှားပါတယ်
ငြင်းနေတာတွေ့ရင်မနေနိုင်ဘူး ဝင်ကိုရှုပ်ချင်တာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။:D ကဲကဲ Word သမားရော Page Maker သမားရောသူ့ဟာသူတော့ ကောင်းတာကြည့်ပဲ။ အဲသည်တော့ မကောင်းတာတွေ ကောင်းတာတွေကို ယှဉ်ပြီးပြာမယ်ဗျာ။ ပထမဆုံး PageMaker ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Table ဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့ Word ကိုလုံးဝမမှီတာ ငြင်းမရဘူးဗျ။ နောက်ပြီးတော့ Chart တွေ Graph တွေကို Data တွေနဲ့ဆွဲချင်ရင်တော့ Word မှာပဲရတယ် PageMaker မှာကိုယ်ဟာကို လက်နဲ့ ကြံဖန်ဆွဲမှပဲ ရတယ်ဗျာ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Word မှာက Diagram တွေဆွဲပြီးရင် Connector တွေဆွဲရတာတွေက တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်။ Word မှာက ဘာပြဿနာရှိသလဲဆိုတော့ စာတွေကို ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာမှာ ထားမရတာပဲ နောက်ပြီးတော့ Word မှာပါတဲ့ Features တွေက တော်တော့်ကိုများတယ် ဒါကြောင့် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သူ့ဟာနဲ့သူသုံးတတ်ဖို့က တော်တော်လေး သုံးဖူးမှရတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ Format တွေကို PageMaker မှာလို ဗမာနည်းဗမာ့ဟန်နဲ့ လုပ်ထည့်လိုက်လို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒါမျိုးမှာကတော့ PageMaker ကပိုကောင်းတယ်။ PageMaker မှာက Tool Box ထဲကဟာတွေ သုံးတတ်ရင် တတ်ပြီလို့ပြောလို့ရသလောက် ဖြစ်နေပြီ။ ဒါကြောင့် သင်ရတာပိုမြန်တယ်။ Word ကိုတော့ သင်ရတာ PageMaker ထက်ခက်တယ်ပြောရင် လူတွေလက်ခံချင်မှလက်ခံမယ်ဗျ ကျွန်တော်ပြောတာက သူ့ထဲက Features တွေကို သင့်တော်ရာသုံးတတ်ဖို့ ကိုပြောတာပါ။ စာစီစာရိုက်အခြေခံသင်တဲ့ သင်တန်းကသင်တာမျိုးကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင်တဲ့နေရာမှာတော့ PageMaker ကပိုတတ်လွယ်တယ် ဒါကြောင့် PageMaker ကဒါတွေပိုကောင်းတယ်။ ဒါတွေက တူတာတွေကိုပဲ ယှဉ်ကြည့်နေတာပါ Word ကတစ်ချို့ဟာတွေက Publishing အတွက်မဟုတ်တော့ ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါမျိုးတွေက PageMaker မှာယှဉ်ကြည့်စရာမရှိဘူး။ ဥပမာ - Mail Merge လိုဟာတွေ။
ဒီတော့ PageMaker ကိုလူတွေဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတာက နောက်ဆုံးပြောရရင် ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရလို့။
Word ကိုလူတွေဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ Supporting လုပ်တာတွေများလို့ Table တွေ Diagram တွေ Graph တွေ ထည့်ရတာ အဆင်ပြေလို့။
နှစ်ခုလုံးအတွက်အဆင်ပြေတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှာကြည့်အဝေးကြီးမရှာရပါဘူး။ Microsoft Publisher ကိုသုံးလိုက်ပါ။ ကြည့်ရတာလည်း PageMaker နဲ့သိပ်မကွာဘူး သုံးရတာလည်း အတူတူပဲ။ စာအုပ်ကြီးလှန်ထားသလို ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်း ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ Word မှာရတဲ့ Features တွေလည်းအကုန်ရပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ Microsoft ကထုတ်တာဆိုတော့ OLE အပြည့်ရပါတယ်။ PageMaker လိုလည်း TextBox နဲ့စာရိုက်လို့ရပါတယ်ဗျာ။
နှစ်ခုတည်း သူကောင်းတယ် ငါကောင်းတယ် ငြင်းနေလို့ ထပ်ငြင်းလို့ရအောင် နောက်တစ်ခုထပ်တိုးပေးလိုက်တယ်:D Publisher ဒါပေမယ့် InDesign ကိုတော့ ထည့်မပြောလိုက်တော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါကိုတော့ Word သမားတွေက ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကြိုက်တာတွေ အဲ့သည့်ထဲမှာမရဘူး။ ဒါကြောင့် နှစ်ဘက်လုံးအဆင်ပြေမယ့် ဟာကိုရွေးပြောထားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်ဟာမှမကြိုက်ဘူး LaTeX ပဲကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဗမာလို ရိုက်လို့မရသေးဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ လုပ်နေတုံး။ ဒါပေမယ့် ရိုက်လို့ရသွားလည်း ဘယ်သူမှ သုံးမှာမဟုတ်ဘူး။:D
ကျွန်တော်လည်း၀င်ရေးလိုက်ဦးမယ်။ Word နဲ့ PM ကဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်လို့ ပြိုင်လို့ရောရလို့လားဗျ။ ကျွန်တော်သိထားတာက Word က Word Processing ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ၊ PM က Desktop Publishing ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလေ။ Category မတူဘူးနဲ့တူတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်အမှတ်မှားနေတာဆိုရင် Sorry ပါခင်ဗျား။
အဲ့ဒါကိုပြိုင်နေကြတာပဲ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒါကြောင့်ပြောထားပါတယ် တူတာပဲယှဉ်ပြထားတယ်လို့။ တစ်ချို့ဟာတွေက ယှဉ်ကြည့်လို့ကိုမရတာ။
Pm7 က သုံးရတ ာအဆင်ပြေပါတယ်..........pm က စာရိုက်ရတာ .......အရမ်းအဆင်ပြေတယ်
ms 2007 လဲ အဆင်ပြေတယ်............. 2010 က တော့ ဘယ်လိုလာလိမ့်မယ် မသိဘူး
2010 စမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင် သုံးကြည့်ပေါ့။ 1 month cd တော့ ထွက်နေပြီ။ နေရှင်နယ်မှာ
ကျွန်မက တော့ PM ထက်ကို ပိုပြီးတော့ Indesign ကို ကြိုက်တယ်
သူက ရောသမမွှေ ထားတာလေ
Photoshop ရယ် Microsoft ရယ် PageMaker ၇ယ် ကို ရော မွှေထားတာ
ဟုတ်ပါတယ် အင်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ် သုံးရတာလွယ်ကူပါတယ် microsoft office 2007 ကတော့ ကောင်းတာပေါ့ ရုံးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုရင်ပေါ့ စာစီစာရိုက်ဆိုင်တွေကတော့ adobe pagemaker မလွန်ဆန်နိုင်သေးပါဘူးဗျာ
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆော့က်ဝဲ တစ်ခုပါ။ Pm7 မသုံးတာတောင် ၅နှစ် ၆နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက PM က အခြားoffice software တွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ win စာရိုက်တဲ့စနစ်ကိုပဲ သုံးကြတာပါ။ သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ office မလုပ်နိုင်တာတွေကို PM က လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းမှာ office သုံးဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ ဒီတော့PM ကိုပဲ သင်ပေးပါတယ်။ ၃၄လမ်း၊ ၃၅လမ်း၊ ၃၆လမ်းက စာစီစာရိုက် လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို တောင် သတိပြန်ရလာတယ်။ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းရဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို သုံးပါတယ်။ အခုလက်ရှိသုံးတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အပေါ်က လမ်းတွေမှာ သွားပြီး စုံစမ်းကြည့်ပါ။
ဆိုင်၁၀ ဆိုင်မှာ ဘယ်နှစ်ဆိုင် သုံးသလဲဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ပေါ့။
အဲဒီတုန်းက ဇော်ဂျီ ဆိုတာလဲ မရှိသေးဘူး၊ ယူနီကုဒ်ဆိုတာလာ မလာသေးဘူး။ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို လူတွေသိလာရင် ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ယူရမှာပဲ ချက်ချင်းတော့ ပြောင်းလဲအုံမှာမဟုတ်ဘူး။
Pagemaker မှာ တခြားဟာတွေထက် သာတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါက စာပိုဒ်ညှိတဲ့နေရာမှာ(Justify လုပ်လိုက်ရင်) မြန်မာစာကြောင်းကို ပြေပြေပြစ်ပြစ်ညှိပေးတာပါပဲ။ Word မှာ မြန်မာစာ ပုဒ်ဖြတ်၊ ပုဒ်စုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားမှာ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် ပျက်ကုန်ပါတယ်။ မြန်မာစာမှာ အထူးသဖြင့် ရုံးစာတစ်စောင်မှာ အဲလိုဖြစ်လာရင် ကြည့်လို့မကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ ရုံးစာတွေမှာ Pagemaker ကို လက်မလွှတ်နိုင်ဖြစ်နေကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။
PageMaker အစားကို Adobe က InDesign ပဲထုတ်မယ်လို့ကြေငြာပြီးသားပါ။ နောက်ပြီး ရှိပြီးသား PM ဖိုင်တွေကို သူကပဲ ဖွင့်ပေးနိုင်တာပါ။ အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် ၉၀% layout မှန်ပါတယ်။ အဲဒါက ASCII ပဲ support လုပ်တာဆိုတော့ အဲဒီထက်ကျော်တဲ့ ဇော်ဂျီ၊ ယူနီ စတာတွေကို မပြနိုင်ပါ။ စာ justify လုပ်ရင်ကလွဲလို့ ကျန်တာအားလုံးနီးပါး PM အတိုင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
@CalmHill have u got Unicode support in LaTex? Which editor you used?
I have solution for this. If you want, you can contact me..
where can i download PM7 or InDesign .... plz share me thz
ဒါနဲ့ဘဲ pm ကိုမစွန့်လွှတ်ဖြစ်
Indesign နဲ့စာစီစာရိုက်လုပ်ဖိုဆိုတာ သာမန်အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
certificate,CV , ဖိတ်စာအလွ တို့အသင့်လုပ်ထားတာလေးများ ရနိုင်မလားခင်ဗျား...